Vaovao - Miarahaba antsika Andriamatoa Paul Wang, Filohan'ny C&W International Fabricators any Etazonia hitsidika ny orinasanay ary hanome torolàlana amin'ny asanay.
Miarahaba antsika Andriamatoa Paul Wang, Filohan'ny C&W International Fabricators any Etazonia hitsidika ny orinasanay ary hanome torolàlana amin'ny asanay.
Tamin'ny 9 ora maraina tamin'ny 7 martsa, Paul Wang, filohan'ny C&W International Fabricators any Etazonia, niaraka tamin'i Zhong Cheng, mpitantana ny sampan'i Shanghai, dia tonga tao amin'ny Cepai Group izy ireo mba hizaha sy hamotopotorana. Andriamatoa Liang Guihua, filohan'ny Cepai Group, dia niaraka taminy tamim-pitiavana.
Hatramin'ny taona 2017, nody indray ny tsenan'ny vokatra solika eto an-toerana sy iraisam-pirenena, ary nitombo ihany koa ny fangatahana milina solika, valves ary kojakoja enti-miasa amin'ny tsena ivelany, izay nahatonga an'i Cepai Group hiatrika fotoan-tsarotra sy fanamby vaovao koa.
Ny fahafaha-miaina dia miankina amin'ny fitomboan'ny baiko, raha ny fanamby kosa dia ny filàna fanatsarana tsy tapaka ny tanjaky ny orinasa hiatrehana ny filan'ny tsena miova.
Ny Lehiben'ny Wang, niaraka tamin'ny tompon'andraikitra amin'ny fitantanana teknika, kalitao ary famokarana an'ny Cepai Group, dia nitsidika sy nandinika tamim-pitandremana ny fizotrany manontolo nanomboka tamin'ny akora hatramin'ny famaranana, ny fitsaboana ny hafanana, ny fivoriambe ary ny fizahana. ny fizotry ny famokarana hiantohana ny tahan'ny vokatra sy kojakoja 100%.
Ny filoha Wang dia faly sy afa-po tamin'ny fizotran'ny fizahana rehetra. Natoky tanteraka ny fahaizan'i Cepai famokarana sy ny kalitaon'ny kalitao izy, ary naneho ny fahavononany hanana fiaraha-miasa maharitra miaraka aminay. Cepai koa no ho mpanafosafo ny mofomamy amin'ny fidirana amin'ny orinasa C&W!